प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहालले भाइ प्रकासको मृ’त्युसंग जोडेर ओलीलाई किन लेखिन यस्तो पत्र ? – GALAXY
प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहालले भाइ प्रकासको मृ’त्युसंग जोडेर ओलीलाई किन लेखिन यस्तो पत्र ?
काठमाडौ । नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेता रेणु दाहालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ठूला कुरा नगर्न चेतावनी दिएकी छन् ।
आफ्नो जिल्लामा महाधिवेशनको तयारीका लागि पुगेका ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई चितवनवाट हराउने चेतावनी दिएका थिए । प्रचण्डको छोरी समेत रहेकी दाहालले ओलीलाई यस्तो जवाफ दिएकी हुन् । माओवादी केन्द्रकै सहयोगमा ओली दुई पटक प्रधानमन्त्री भएपनि उनले ठूलो कुरा गर्दै हिँडेको दाहालको भनाइ छ ।
‘इतिहासमा दुई पटक प्रधानमन्त्री माओवादी कै सहयोगमा भएकाले ठुला कुरा नगरेकै बेस होला’, दाहालले ओलीप्रति कटाक्ष गर्दै सामाजिक सञ्जालमा भनेकी छन् । उनले विगतमा ओलीको लागि भोट माग्दै प्रचण्ड झापासम्म पुगेको स्मरण गर्दै दाहालले सोही बेला आफ्नो भाइ गु’माउनु परेको समेत बताएकी छिन् ।
‘ओलीलाई भोट माग्न ओलीको क्षेत्रमा ओलीसहित अध्यक्ष प्रचण्ड झापा जाँदा घरमा आमा मात्र, त्यहीपनि पा’र्किन्सनको बिरामी’, दाहालले भनेकी छिन्, ‘भाइको मध्यरातमा अचानक स्वास्थ्यमा समस्या आई दुःखद घटना घट्यो । घरमा परिवारका सदस्य कोही पनि नभएको बेला र सबै आ–आफ्नो चुनावी मैदानमा । बिरामी आमा मात्र घरमा । के थाहा समयमै अस्पताल लैजान पाएको भए भाइको ज्या’न जो’गिन पनि सक्थ्यो।’
दाहालले यस्तो परिस्थितिबाट माओवादीसँगको सहकार्यले मात्र ओली प्रधानमन्त्री बनेको जिकिर गरेकी छिन् । दाहालले यस्तो परिस्थितिबाट माओवादीसँगको सहकार्यले मात्र ओली प्रधानमन्त्री बनेको जिकिर गरेकी छिन् । ‘झन्डै दुई तिहाईको सरकार के ओली एक्लैले ल्याएको हो ?
ओलीले के भनेका थिए चितवन पुगेर ?
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चितवनमा महाधिवेशन गर्ने कुरा ठूलो नभएको बताएका छन् । सोमबार एमालेको भतरपुर महानगर कमिटीको अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले यहाँ महाधिवेशन गरे पनि, नगरे पनि जित्ने दाबी गरे।
‘चितवनमा महाधिवेशन गर्ने कुन्‌सा ठूलो कुरा भयो,’ प्रचण्डतिर संकेत गर्दै ओलीले भने, ‘किन छटपटी ? महाधिवेशन गरेरमात्रै हामीले यो जिल्ला जित्ने होइन । महाधिवेशन गरे पनि, नगरे पनि हामी जित्छौं ।’
ओलीले रेणु दाहाललाई कांग्रेसले बोकेको, आफूहरूले पनि गल्तीबस् बाउ (प्रचण्ड) लाई बोकेको भन्दै अब त्यस्तो गल्ती नहुने बताए ।
‘छोरी बोकेर कांग्रेसले बढ्तै फुर्ती देखाएको थियो, हामीले पनि लौन त भनेर बाउ बोकेको,’ ओलीले भने, ‘ अब त्यस्तो गल्ती गर्नु हुँदैन । जनताले एकपटक धोका पाए । म त झुक्किएर दुई-दुई पटक भोट माग्न आएँ । अब त्यो जमना गयो ।’ रेणु दाहाललाई लक्षित गर्दै उनले भने, ‘फेरि मतपत्र च्या’त्ने सपना नदेखे हुन्छ ।’
एमालेको १०औँ महाधिवेशन चितवनमा गर्ने तय भएपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूविरुद्ध लड्नकै लागि एमालेले यहाँ महाधिवेशन गर्न लागेको बताएका थिए ।
प्रचण्डको गृहजिल्लासमेत रहेको चितवनमा आएर ओलीले भने, ‘चितवनमा महाधिवेशन गर्ने भइयो के भन्या’ थ्यो, सेरोफेरो सबै मेरो जस्तो पो गर्छन् । चितवनमा महाधिवेशन गर्न के ठूलो कुरा भयो ? पहिले बुटवलमा गर्‍यौँ, नेपालगंज र जनकपुरमा गर्‍यौँ । यसपालि चितवनमा गर्छाैं । किन छ’टप’टी ?’